५ लाख खाएको उजुरी परेपछि अनमोलको स्पष्टिकरण, ‘स्क्रिप्ट राम्रो बनाउँ भन्दा यस्तो आरोप !’ - News20 Media
March 8, 2020 March 8, 2020 N20LeaveaComment on ५ लाख खाएको उजुरी परेपछि अनमोलको स्पष्टिकरण, ‘स्क्रिप्ट राम्रो बनाउँ भन्दा यस्तो आरोप !’
काठमाडौं। पाँच लाख रूपैयाँ ठगी प्रकरणमा मुछिएका नायक अनमोल केसीले स्पष्टिकरण दिएका छन्। चलचित्र ‘धुपौरा’का लागि पाँच लाख रूपैयाँ अग्रिम लिएर काम नगरेको भन्दै उनीविरुद्ध फिल्म्स नेपाल, जयन श्रेष्ठ इन्टरटेनमेन्ट प्रालिका तर्फबाट निर्माताद्वय जयन श्रेष्ठ र रुपेश खड्कीले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। उक्त आरोपबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् अनमोलले स्पष्टिकरण दिएका हुन्। केहीदिन चलचित्र ‘ए मेरो हजुर–४’ को छायांकनका क्रममा व्यस्त रहेकाले उक्त आरोपको विषयमा स्पष्टिकरण दिन नसकेको केसीले बताएका छन्।
यस्तो छ अनमोलको स्टाटस:
करीब ३,४ महिना पहिला “धुपौरो” नामक सिनेमाको साइन गरेको थिएँ । फिल्म साइन गरे बापत फिल्मका निर्माताले साइनिङ्ग अमाउण्टको रुपमा रु. ५ लाख दिनु भएको थियो । यहाँहरु सबैलाई अवगतै छ कि मैले फिल्म साइन गर्दा मेरो विवेकले भ्याएसम्म स्क्रीप्टलाई प्राथमिकता दिने गरेको छु । “धुपौरो” साइन गर्दा मैले यसको वानलाइन स्टोरी मात्र सुनेको थिएँ । स्क्रीप्ट तयार भएर आउँदा त्यो मैले सुनेको वानलाइन भन्दा धेरै फरक थियो । मैले निर्माता निर्देशकलाई स्क्रीप्टमा थप काम गर्न आग्रह गरें ।
स्क्रीप्टमा थप मेहनत गरेर अझै राम्रो सिनेमा बनाऊ भन्नु के मेरो गल्ती हो र ? तर उहाँहरुले त्यही स्क्रीप्टमा सुटिङ्गमा जान मलाई कर गर्नु भयो जुन मैले मानिन् । यही कुरामा मत बाझियो र यही स्क्रीप्टमा फिल्म बनाउनुहुन्छ भने तपाईँहरुको पैसा फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ भन्दा उहाँहरुले लिन मान्नु भएन । र, अहिले अचानक उल्टो म माथी ठगीको आरोप लागेको सुन्दा म स्तब्ध भएको छु ।
आफैँले डण्ठिनी भनेका प्रहरीसँग कुम जोडेर आस्थाले लेखिन्– बदलाको कुराभन्दा क्षमा ठूलो !